Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Israel machibidoro ndị ọbịa si mba asaa dị na ndịda Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Botswana na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lesotho • Akụkọ kacha ọhụrụ na Mozambique • Akụkọ kacha ọhụrụ na Namibia • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
Ọfịs Prime Minister nke Israel kwupụtara taa na agbakwunyela South Africa na mba Africa isii ndị ọzọ na ndepụta mba 'acha uhie uhie' nke Israel.
Ụdị dị iche iche - nke a na-akpọ B.1.1.529 - nwere "mkpụrụ ndụ a na-adịghị ahụkebe" nke mmụgharị, bụ nke metụtara n'ihi na ha nwere ike inyere ya aka ịgbanahụ nzaghachi mgbochi ahụ ma mee ka ọ dịkwuo mfe, ndị ọkà mmụta sayensị gwara ndị nta akụkọ na nnọkọ akụkọ na South Africa.
Na-esochi nzukọ nke Prime Minister nke Israel Naftali Bennett, mba Africa asaa - South Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia na Eswatini - etinyere na ndepụta nke mba "acha uhie uhie", ma ọ bụ mba ndị Izrel anaghị ekwe ka ha gaa, ọ gwụla ma ha nwetara ikike pụrụ iche n'aka ndị ọrụ ahụike Israel.
A ga-achọrọ ndị Israel na-alọta na mba ndị ahụ ka ha nọrọ n'etiti ụbọchị 7-14 n'ụlọ nkwari akụ iche mgbe ha rutere.
A gaghị ekwe ka ndị ọbịa si mba Africa a bata n'Izrel kwa, ụlọ ọrụ Prime Minister kwuru.
Israel edekọla nde mmadụ 1.3 enwetara COVID-19 yana ihe karịrị 8,000 nwụrụ kemgbe ọrịa ahụ malitere.
Dịka Ministri ahụike nke obodo siri kwuo, naanị 57% nke IsraelOnu ogugu ndi mmadu nke nde 9.4 agbagoro ogwu n'uju.